DAAWO: Dowladda Jabuuti oo dhaqaale ugu deeqday dadkii ku hantida beelay dabkii Suuqa Waaheen – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Dowladda Jabuuti oo dhaqaale ugu deeqday dadkii ku hantida beelay dabkii Suuqa Waaheen
April 12, 2022 Xuseen Comments Off on DAAWO: Dowladda Jabuuti oo dhaqaale ugu deeqday dadkii ku hantida beelay dabkii Suuqa Waaheen
Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed ayaa faah faahin ka bixiyay xadi dhaqaale ee dowladda Jamhuuriyada Jabuuti kusoo kaalmaysay dadkii ay saameysay Masiibadii Dabku haleeshay ee Suuqa Waaheen.
Safiir Cabdifatax oo ugu horayn fahfaahinaya hawlaha caawimada Jabuuti usoo dirtay Somaliland, iyo weliba hawlgalada dhaqaale ururineed ee socda, ayaa yiri.
“Ugu horayn waxaan halkan uga mahad-celinayaa anigoo ka wakiil Madaxweynah Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Shacabka Somaliland, Dawlada Jamhuuriyada Djabuuti, oo u ugu horeeyo Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Ismaacil Cumar Geelle iyo Shacabkiisa, oo ahaa Madaxweynihii ugu horeeyey ee lasoo xiriiray Madaxweyneheena markii ay masiibadda Dabku Haleeshay Suuqa Waaheen”.
Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed, waxa uu sheegay in Xukumadda Jabuuti ay Arbacadii hore soo gaarsiisay Somaliland Deeq lacageed oo dhan Hal-milyan oo Dollar, sidoo kalena waxay Xukumadda Madaxweyne Geelle Mar labaad Somaliland ugu soo deeqday xadi-lacageed oo dhan 580-shan boqol iyo Sideetan kun oo Dollar, waxana dhaqaalahan dambe loogu talo-galay in Raashin loo siiyo Dadkii Suuqa Waaheen ku Gubatay Hantidoodii.
Geesta kale, Safiir Cabdifatax waxa uu sheegay in Xukumadda Jabuuti ay weli sii waddo Dedaalo kale oo dhaqaale loogu ururinaayo Dadka walaalahood ah ee u ka Gubtay Xaruntii ganacsiga ee Waaheen. waxanu tilmaamay inay ay socdaan Shirar ay hoggaaminayaan Wasiirka Ganacsiga, Wasiirka arrimaha gudaha, Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga, iyo Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed oo kulamo lagula yeelanayo Baananka Caalamiga ah ee dalka Jamhuuriyada Jabuuti iyo Ganacsatada dalkaas.